Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Isniin Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 17, 2019 at 08:22 Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Isniin Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub.2019-06-17T11:22:12+01:00 CAYAARAHA
Kooxda Juventus ayaa isku daygii ugu danbeeyay ku doonaysa in ay kula soo saxiixato kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt iyada Old Lady doonaysa in ay kooxaha yurub ka hor qaado. Xidhiidhka Juventus iyo wakiilka De Ligt ee Mino Raiola ayaa ah mid fiican.
Arsenal ayaa goolhaye David Ospina ku luminaya £3.5 milyan gini kaliya kadib markii ay kooxda Napoli go’aan ku gaadhay in ay heshiiskiisa amaahda ahaa mid rasmi ah u badasho.
Arsenal ayaa lumisay heshiiskii ay qarka u saarnayd ee ay kula soo wareegaysay xidiga reer Belgium ee Yannick Carrasco wuxuuna hadda xidigani u wareegi karaa koox kale.
Manchester United ayaa rajaynaysa in ay kooxda Leicester City u dirto dalab lacag kaash ah iyo ciyaartoy iskugu jira oo ay ku dalbanayso difaaca dhexe ee Harry Maguire.
Arsenal ayaa heshiis shan sanadood ah la gaadhay difaaca kooxda Saint-Etienne ee William Saliba waxayna Gunners saxiixa xidigan kaga hor martay kooxaha Man United iyo Man City.
Dhinaca kale Arseanl ayaa wada xaajood la furtay bartilmaameedkii Manchester United ee Thomas Meunier laakiin kooxda Paris Saint-Germain ayaa dalbanaysa lacag £27 milyan gini ah iyo waliba lacago ku xidhnaan kara waxa uu Gunners la gaadhi karo haddii heshiiskiisa la dhamaystiro.
Manchestrer United ayaa wali doonaysa saxiixa da’yarka kooxda AS Monaco ee Youri Tielemans balse wali kooxda Leicester City oo uu amaah ku joogo ayaa u ah doorashada kowaad.
Manchester United ayaa tartan cusub kala kulmaysa xidiga khadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes iyada oo kooxda Atletico Madrid doonayso in Reds Devils ka dul qaado xidigan.
Crystal Palace ayaa badalka bartilmaameedka Manchester United ee Aaron Wan-Bissaka waxay u calaamadsatay xidiga aadka loo qiimeeyo ee kooxda Atalanta ee Timothy Castagne.
Xidiga Barcelona ku soo dhibtoonayay ee Philippe Coutinho ayaa u furan in uu Premier league ku soo laabto isaga oo diyaar u ah in uu xagaagan ku biiri karo kooxda Chelsea taas oo guuldaro u keeni karta Manchester United iyo PSG.
ayaa Gary Cahill ayaa Inter Milan kula midoobi kara tababarihiisii hore ee Antonio Conte iyada oo xidiga reer England uu si xor ah kaga bixi doono Stamford Bridge marka la soo gaadho June 30.
goolhaye Simon Mignolet ayaa xagaagan iskaga bixi doona Anfield waxayna Reds badalkiisa ka dhigan kartaa goolhayaha kooxda Southampton ee Alex McCarthy.
Riix 2 si aad wararka kale ee wargaysyada yurub u sii akhrisato
« Kenya Oo Ku Dacweyneysa Ingiriiska iyo Norway Iney Hurinayaan Kiiska Badda Ee Kala Dhaxeeya Soomaaliya
Kenya on high alert after suspected Ebola case in Kericho »